DMF-Z-62S လျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင် China Manufacturer
သွေးခုန်နှုန်း Solenoid Valve,DMF-Z-62S Electromagnetic Pulse Valve,နစ်မြုပ် Pulse Solenoid Valve
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70% ဖေါ်ပြချက်: သွေးခုန်နှုန်း Solenoid Valve,DMF-Z-62S Electromagnetic Pulse Valve,နစ်မြုပ် Pulse Solenoid Valve
Home > ထုတ်ကုန်များ > ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings > electromagnetic Pulse Valve > DMF-Z-62S လျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်
 DMF-Z-62S လျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်
အလုပ်လုပ်ဖိအား: 0.8MPa မှ 0.3
အပူချိန်: 10 ~ 60 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆ: အလတ်စားသုံးပြီး: စင်ကြယ်သောလေကြောင်းရန်
အလုပ်လုပ်ဗို့: AC အ: 110 / 240V, DC: 24V
ဘဝမြှေး: 1 သန်းကြိမ်
အမည်ခံအချင်း :? 25? 40? 50? 62? 76? 40 ဆက်သွယ်ထားသောချည်: G1 '' G1 '' G2 မှာ '' G2 မှာ '' G3 '' G1?
Net ကအလေးချိန်: 0.8kg1.8kg3.0kg3.4kg4.0kg + 1.4kg ။
ညာဘက်ထောင့်သွေးခုန်နှုန်း solenoid valve ၏အားသာချက်များ:
တစ်ဦးလေယာဉ်မှူးတံဆိပျအဖြစ်အာဂွန်ကို arc ဂဟေ 2. လျှောက်လွှာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏သွေးခုန်နှုန်းလျှပ်စစ်သံလိုက်အဆို့ရှင်တစ်ဦးအရည်အသွေးမြင့် solenoid valve ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏မြှေးအောက်ပါအားသာချက်ရှိပါတယ်:
1, အမျိုးမျိုးသောကြီးတွေ, အသေးစား, အထူပါးလွှာသောအထည်ကိုကလစ်မြှေးဖွံ့ဖြိုး။
2, ထည် compression အစွမ်းသတ္တိကိုဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များကိုနှင့်သင့်လျော်သောကော်နှင့်အထည်ဒြပ်ပေါင်းများနှင့်အညီစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်။
3, ရော်ဘာပစ္စည်းဒါမှအပေါ် NBR, EPDM, FDA က, CR, ရော်ဘာ, အော်ဂဲနစ်ဆီလီကွန်, FKM နှင့်ရှိနေသည်။
ဖိုင်ဘာအထည်, နိုင်လွန်, polyester, ဝါဂွမ်းပတ္တူ, အမျိုးမျိုးသောအတိုင်နှင့်အဖောက်ချည်4ချဲ့အထည်။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: သွေးခုန်နှုန်း Solenoid Valve , DMF-Z-62S Electromagnetic Pulse Valve , နစ်မြုပ် Pulse Solenoid Valve , သွေးခုန်နှုန်း Solenoid Valve မြှေး , သွေးခုန်နှုန်း Solenoid Valve စီးရီး , သွေးခုန်နှုန်း Solenoid Valve 220V ဆက်သွယ်ရေး , အသေးစားအနိမျ့ဖိအား Solenoid Valve , သွေးခုန်နှုန်းဂျက်မြှေး Valve